Xuseen Aadan Cige (Deyr): Yaa Soo Canaantay?…W/Q Siciid Maxamuud Gahayr – somalilandtoday.com
Xuseen Aadan Cige (Deyr): Yaa Soo Canaantay?…W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
Xuseen Aadan Cige (Deyr) Wasiirkii Hore ee Ganacsiga iyo Af-hayeenkii hore ee madaxtooyadu, waxa uu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay bandhiggii buugga Miyiga illaa Madaxtooyada (Socdaalkaygii Guusha) ee uu qoray Xirsi Cali Xaaji Xasan. Dhacdadan saamaynta lihi waxa ay 26kii Oktoobar 2018ka ka qabsoobtay Green Plaza Hotel ee magaalada Hargeysa. Goore hore ayuu madasha yimi iyada oo aan munaasibaddu bilaabmin. Nuqul buugga ah ayuu sitay, anigu goobta waan uga sii horreeyay. Waa qoraa afafka Soomaaliga iyo Ingiriisiga wax ku qora oo hibo u leh qalinka.
Goob ay saaxiibbo badani fadhiyaan ayaan arkay. Sidaas ayaan ugu soo guuray. Haddii aan dhanka bidixda ka bilaabo: Xasan Cabdi Madar, Xuseen Aadan Cige (Deyr), Xasan Saleebaan Dhuxul (Laab-saalax) Hassan Duhul Labsalah, Maxamed Saleebaan Cumar Muhammad Suleiman, Cabdi Cali, Siciid Maxamuud Gahayr, Axmed Saleebaan Birinbir Axmed Suleiman iyo Mustafe Maxamed Khayrre Mustafe Khaire ayaannu ahayn.
Xuseen Aadan Cige (Deyr) wuu la dhacsanaa madasha. Isaga iyo Xasan Cabdi Madar ayaa sitay nuqullo uu qoraagu u saxeexay. Aad ayuu akhriska u danaynayay. Haddii aanan qaldanayn, waxa aan arkay isaga oo aad ugu ololaynaya in uu ka mid noqdo dadka fagaaraha ka hadlaya. Ma se ay suurtogelin. Akhriska iyo il-marinta buugga ayuu aad ugu jeeday. Intii aan iibka buugga la bilaabin ayay ahayd, sidaas ayaannu kolba uga soo qaadanaynnay diiwaanka oo aanu isha u marinaynnay.
Xuseen Aadan Cige (Deyr) wuxuu ka walaacsanaa in buuggaasi dadka dhex raaco, isaga oo aad u xiisaynaya saxeexa qoraaga. Waxa aanu ballanqaadnay in uu nuqulku gacan aammin ah ku jiro. Markii dambe ee buugaagta iibkooda la bilaabay, qof kastaaba waxa uu helay dhigane uu akhristo.
Kolkii uu hadlayay Xirsi Cali Xaaji Xasan Hersi Hassan waxa uu aad u ammaanay kuna hal-qabsaday, raggii tifaftirka ka qayb qaatay oo ay ka mid ahaayeen Xuseen Aadan Cigen (Deyr), Xasan Cabdi Madar, Maxamed Baashe Xaaji Xasan iyo Maxamed Haaruun Biixi oo aan kobta goobjoog ka ahayn. Waxa aan arkayay Xuseen Aadan Cigen (Deyr) oo gacanta taagaya markii Xirsi uu sheegay doorkiisa buugga iyo xilalkii uu soo qabtay. Inta aaanu daahfurka joogno, waxa aan odhan karaa waxa aanu isha marinnay qaar ka mid ah qodobadda uu Xuseen Aadan Cigen (Deyr) ka biyo-diiday marka dambe. Markaas hore kama aannu arkin dareen didmo ah.
Walaw uu Xuseen Aadan Cige (Deyr) iska barraxay in aanu ogayn qaybo ka mid ah dhiganaha Miyiga Illaa Madaxtooyada, waxa aan is-weydiinayaa: ma iskii ayuu shirka jaraaid u qabtay mise dad ayuu ku raalli-gelinayaa?